राहुल गान्धीले दिए राजीनामा, काँग्रेसको नयाँ अध्यक्ष 'गैर-गान्धी' बन्ने - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । भारतको प्रमुख विपक्षी काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसभन्दा पहिले नै उनले काँग्रेसको अध्यक्ष पद छाड्ने घोषणा गरेका थिए । तर पार्टीले निर्वाचन परिणामलगत्तैको उनको निर्णययलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
राजीनामा दिँदै उनले गत महिना सार्वजनिक भएको लोकसभा निर्वाचनको मत परिणामअनुसार पार्टीको पराजयको जिम्मेवारी लिएका छन् । उनले आफ्नो राजीनामा पत्र सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा समेत राखेका छन्।
@RahulGandhi 16h16 hours ago
It is an honour for me to serve the Congress Party, whose values and ideals have served as the lifeblood of our beautiful nation. I owe the country and my organisationadebt of tremendous gratitude and love. Jai Hind
12,074 replies12,715 retweets59,239 likes
राजीनामामा उनले अरुको जवाफदेहिता खोज्नुअघि आफू जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
भारतको काँग्रेस राजनीतिमा गान्धी परिवार लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएको छ । गान्धीका पिता राजीव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुबुवा जवाहरलाल नेहरु भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् ।
राजीनामा पत्रमा उनले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीप्रति आफ्नो कुनै द्वेष वा रिस नरहेको बताएका छन् । तर भारतको बारेमा सो पार्टीको विचारको आफ्नो शरीरको प्रत्येक कोषले विरोध गर्ने बताएका छन् ।
उनले चुनावी निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै भनेका छन् ‘हामीले राजनीतिक पार्टीसँग लडेका होइनौं । हामीले भारतको समग्र पद्दतीसँग लडेका हौं।’
नयाँ अध्यक्ष गैर-गान्धी हुने:
भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार काँग्रेसले एक महिना भित्र आफ्नो नयाँ अध्यक्ष छान्नुपर्नेछ ! सूत्रको अनुसार हप्ता दश दिन देखि नै यस कार्य शुरु हुनेछ ।
काँग्रेस अन्य वरिष्ठ नेता पनि यहि मान्छन कि राहुल गान्धीलाई मनाउनु भन्दा नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नु नै पार्टीलाई लागि फाइदाजनक छ । काँग्रेस तेलंगानामा टुटेको छ । पन्जावमा जहाँ पार्टी सत्तामा भएको मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिंदर सिंह र नवाजोत सिद्दुको झगडाले पनि पार्टीलाई नोक्सान पुर्याइरहेको छ।
राहुल गान्धीले राजनीमा दिएसँगै कोहि गैर-गान्धी नै काँगेसको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बलियो रहेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरिरहेका छन् ।
विगतमा सन् १९९१ देखि १९९६ सम्म नरसिंहा राव काँग्रेसको अध्यक्ष थिए । उनी पछी सन् १९९६ देखि १९९८ सम्म सिताराम केसरी अध्यक्ष रहेका थिए। केसरी पछी सोनिया गान्धी अध्यक्ष बनेकी थिइन् । र सोनिया पश्चात राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस पार्टी रहँदै आएको थियो ।
गैर-गान्धीको नेतृत्वमा काँग्रेस रहने हल्लासँगै नयाँ अध्यक्षमा मनोनित हुनसक्ने केहि नामहरु बाहिर आएका छन् । मनमोहन सिंह, मोतीलाल वोरा, कर्ण सिंह, खडगे, अहमद पटेल, अम्बिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, वीरप्पा मोईली, ओमन चांडी, शुशील कुमार शिन्दे देखि मिरा कुमारसम्मको नामको चर्चा भइरहेको छ । यी नामहरु बाट पनि यै प्रष्ट हुन्छ कि, काँग्रेसको नयाँ अध्यक्ष गैर-गान्धी नै बन्नेछन् ।